Kyrgyzstan: FAndrafetana Dokambarotra Manafintohina, Niteraka Adihevitra Nasionalista · Global Voices teny Malagasy
Kyrgyzstan: FAndrafetana Dokambarotra Manafintohina, Niteraka Adihevitra Nasionalista
Voadika ny 31 Desambra 2018 13:28 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 2009)
Tamin'ny 22 Aprily, notsikerain'ny depiote Askarbek Shadiev nandritra ny fotoam-pivorian'ny antoko ”Ak Zhol” ny petadrindrin'ny dokambarotry ny Birao Soisa ho an'ny Fiarahamiasa. Tohina tamin'ny nametrahan'ny mpanao sary iray tsy fantatra anarana sarina lakroa fotsy iray teo amin'ny sainam-pirenen'i Kyrgyzstan ilay depiote.
Misy petadrindrina lehibe iray ho fankalazana ny tsingerina faha-15 niforonan'ny Birao Soisa Ho an'ny Fiarahamiasa, izay nametrahana lakroa fotsy be tamin'ny sainam-pirenena Kyrgyzstana teo amin'ny fifanapahan'ny Lalana Mira sy ny Arabe Gorky. Mety tsy dia nisy niraharaha izany angamba ianareo. Mino aho fa tokony hanara-maso ny zavatra toy izao ny governemanta. Fanambaniana ve izao?, hoy izy.
Tao anatin'ny tafatafa Kloop.kg , naneho hevitra mikasika ny fanambarany ihany koa i Askarbek Shadiev.
Misy lakroa fotsy be eo amin'ny sainantsika Kyrgyz. Mihevitra aho fa tsy mifanaraka amin'ny fenitra ara-moraly izany ary fandikàna ny lalàna mikasika ny Sainan'ny Repoblika Kyrgyz. Mila mametraka izany raharaha izany manoloana ny fitsarana isika ary handresy, hoy i Shadiev.
Tokony ataony miaraka ireo saina ireo, fa tsy tokony nanao sary io lakroa io teo amin'ny sainantsika. Tsy mahatakatra izany ny vahoakantsika, ary mihevitra aho fa manafintohina izany, hoy i Shadiev.
Ho valin'ny famelezana nalefan'i Shadiev, nanazava ny Birao Soisa Ho an'ny Fiarahamiasa, fa nomen'ny Vaomieram-pirenena Nasionaly momba ny Tenim-pirenena ambany fiahian'ny Filoha azy ireo ny fanomezandalana ofisialy hampiasa faneva toy ireny.
Maneho ny faha-15 nitsingerenan'ny fiarahamiasa teo amin'i Kyrgyz-Soisa ilay fango natao pirinty teo amin'ireo petadrindrina dokambarotra sy sehatra fampiroboroboana maro hafa / Fango maneho ireo fanevan'ny firenena roa mpinamana, natambatra – ny Repoblika Kyrgyz sy i Soisa, hoy ny birao Soisa.
Nitsikera avy hatrany an'ilay mpanao sary tsy fantatra anarana ireo mpampiasa Aterineto ary namoaka sarin'ilay solombavambahoaka niaraka tamin'ny sainam-pirenen'ireo firenena roa ireo ho toy ny mariky ny firahalahiana eo amin'i Kyrgyzstan, Soisa ary i Shadiev. Na izany aza, nitovy ny hevitr'ireo mpampiasa aterineto ireo:
Hitantsika indray fa tsy misy atao ny Parlemanta. Tokony ireo mpisotro ronono sy bekotro maroholatra mahantraeto amintsilka no ho eritreretin'io …, hoy [ru] ny hevi-dehiben'i SpaceWalker, mpampiasa ny sehatra fifanakalozankevitra Diesel.